नमागी पूरा हुनुपर्ने मागका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको छ : गंगा थापा [भिडियो वार्ता]
पुस ३०, २०७४ आइतवार २१:१३:०० प्रकाशित
नेपाल नर्सिङ संघको अगुवाइमा अहिले देशभरिका नर्स आन्दोलनमा छन्। कालोपट्टी बाँधेर विरोध सुरु गरेका उनीहरु तीन दिनदेखि एक घन्टा ड्युटी छाडेर निस्किरहेका छन्। सोमबारदेखि एक सिफ्ट नै छाड्ने नर्सहरुको आन्दोलनको पूर्व कार्यतालिका छ। यति गर्दा पनि माग सुनुवाइ नभए २४ घन्टा नै ड्युटी छाडेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिने बताइएको छ। उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी संघकी कार्यवाहक अध्यक्ष गंगा थापासँग यही सेरोफेरोमा डिबी खड्काले गरेको संवादः
नर्स हरबखत बिरामीको साथमा हुनुपर्ने मानिन्छ। तपाईंहरुलाई सेवा नै छाडेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने वाध्यता किन आइलाग्यो?
आन्दोलन कसैले रहरले गर्दैन। वाध्य भएर यस्तो निर्णयमा पुग्नुपरेको हो। हामी शोषित छौं, पीडित छौं। हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा ती पीडा सुनायौं। पटक–पटक स्वास्थ्य मन्त्रालय धायौं। २१ बुँदामा हाम्रा माग पेश ग¥यौं। तर, कहिल्यै हाम्रा कुरा प्राथमिकतामा परेनन्। हाम्रो कुरा सुनिएन। त्यसपछि बाध्य भएर हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौं।
तपाईंहरुले आन्दोलन थालेको दुई हप्ता भयो। सरोकारवालाले अझै केही प्रतिक्रिया जनाएनन्?
हामीसँग कुरा गर्ने नाममा अल्झाइरहेको महसुस गरेका छौं। हामीले यसअघि मन्त्रालयसँग वार्ता गर्दा नर्सिङ महाशाखा राख्ने भनिएको थियो। तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझ्दा राखिएको रहेनछ। यसैगरी, अन्यायपूर्ण तरिकाले निकालिएका नर्सहरुको पुनर्बहालीको कुरामा पनि छानविन हुने भनिएको थियो। छानबिन गरेर सुझाव दिन बनेको समितिले स्वास्थ्य सचिवलाई सुझाब बुझाएको छ। तर, अझै निर्णय भएको छैन।
भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट पूर्वाग्रही रुपमा निष्कासित नर्सको पुनर्वहालीका लागि तपाईंहरु यसरी लडिरहँदा उपत्यका बाहिरका नर्सका यस्तै समस्या सुनिएनन् भन्ने गुनासो पनि छ नि?
आफूमाथि अन्याय भएपछि न्यायका लागि नर्सिङ संघमा लिखित निवेदन पर्छ। त्यसैका आधारमा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर समस्याको समाधान खोज्छौं। धेरै ठाउँ हामी पुगेका छौं। यतिबेला कैलालीको टीकापुरस्थित स्वास्थ्य संस्थाबाट निष्कासित ४ जना अनमीले न्याय नपाएको कुरा आएको छ। त्यो समय हाम्रा उपाध्यक्ष र सचिव त्यहीँ पुगेर जिल्ला प्रशासन र अस्पताल निर्देशकसँग कुरा गरेरर आउनुभएको छ। पछि रामजनम चौधरी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा मन्त्रालयमा संघको टोली नै पुगेर उक्त समस्या उठाएका थियौं। मन्त्री चौधरीले आफ्नो क्षेत्र पनि त्यही भएकाले समस्या समाधानमा आफूले जिम्मा लिने भनेका थियो। त्यसपछि पीडितहरु हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएन। अहिले फेरि न्याय नपाएको कुरा आइरहेको छ। हामीले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौं र त्यसका लागि पहल गर्नेछौं।
तपाईंहरुले मागको पहिलो नम्बरमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट निष्कासित नर्सको विषय राख्नुभएको छ। यसलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी थियो?
सुरुमा त अन्यायमा परेकाले न्याय पाउनुपर्‍यो। त्यसपछि भविष्यमा अन्यायमा पर्न सक्ने अवस्थालाई रोक्नेतर्फ लाग्ने हो। यसै पनि, यो नयाँ र एउटा मात्रै घटना होइन। यस्ता खालका व्यवहार नर्समाथि भइरहेका छन्। फरक यति हो, त्यहाँका नर्स अन्याय विरुद्ध लड्न कस्सिए। हामीले साथ दियौं। घटना बुझ्दा पनि उनीहरुमाथि पूर्वाग्रह साँधिएको देखिन्छ। यति मात्रै होइन, त्यहाँ नर्सलाई भोलेन्टिएर रुपमा काम गराउने, ७ दिन काम गराएर ४ दिनेको पारिश्रमिक दिने गरिएको रहेछ। जुन त्यहाँकै नर्सहरुले आवाज उठाउँदा रोकियो।
त्यससँगै हामी नीति नियमलाई बलियो बनाउने कुरामा पनि लागेका छौं। नर्सिङ महाशाखा, उद्योग, स्कुल र होमकेयर नर्सका विषय माग राखेका छौं। नर्सिङ– बिरामीको अनुपातका कुरा उठाएका छौं।
नर्सहरुमाथि कस्ता–कस्ता विभेद र शोषण भएको उजुरी तपाईंकहाँ पर्छ?
चरम श्रम शोषण छ। एकजना स्टाफ नर्स बन्न ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। बिएससी तहका नर्सका लागि १४ लाख लाग्छ। तर, अहिले धेरै अस्पतालमा पारिश्रमिक हेर्नुभयो भने ८ हजारदेखि १४ हजार रुपैयाँ मासिक मात्रै छ। केही निजी अस्पताललाई अपवाद मान्ने हो भने अधिकांश अस्पतालले पारिश्रमिकमा शोषण गरेका छन्। प्राविधिक विषय पढेर आएकालाई श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह पारिश्रमिक दिइनु कहाँसम्म जायज हुन्छ?
एकजना नर्सले तोकिएभन्दा धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने वाध्यता छ भन्ने कुरा आन्दोलनमा उठिरहेको छ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ?
अहिले एउटै नर्सले २५ देखि ५० बिरामी हेर्नुपरिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार सामान्यतः सघन उपचार कक्ष (आइसीयू) मा १ बिरामी बराबर १ जना नर्स हुनुपर्छ। अस्पतालको सेवा सिफ्टका हिसाबले ३ सिफ्ट हुँदा ३ जना नर्स चाहिन्छन्। त्यसैगरी शल्यकक्षमा १ बिरामी बराबर ३, वार्डमा ५ बिरामी बराबर १ नर्स हुनुपर्छ।
एकातिर कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्छ, अर्कातिर बढी जिम्मेवारी छ। यसले नर्समा स्वभाविक रुपमा तनाव बढाएको छ। त्यो तनाव कहिलेकाहीँ बिरामीमा गएर पोखिन्छ होला। त्यसैले पनि, नर्सहरु छुच्चा हुन्छन्, बोली राम्रो छैन भनेर गुनासो आउने गरेको छ। तैपनि हामीले बोलीवचनमा ध्यान दिन साथीहरुलाई आग्रह गरिरहेकै छौं। राम्रो नर्सिङ केयर पाउने हो भने नर्सहरुको अनुपात पनि त सही हुनुपर्‍यो। यसका लागि हामीले भन्ने होइन, सेवाग्राही जाग्नुपर्छ। हेर्दा हाम्रा लागि भए पनि असर बिरामीलाई परिरहेको छ।
अस्पतालमा नर्सिङ प्रमुख छन्, उनीहरुको नियन्त्रणमा यस्ता कुराहरु छैनन्?
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा महाशाखा छैन। त्यसैले अस्पतालहरुमा नर्सिङ निर्देशकको काम ड्युटी बनाउने र ड्युटी खटाउने भन्दा बढी हुँदैन। अस्पतालको बैठकमा सबैले आफ्ना कुरा भनेपछि अन्तिममा नर्सिङ निर्देशकलाई सोधिन्छ, ‘तपाईंको केही थियो कि?’ जब आफ्ना कुरा भन्न थाल्यो, प्रायः उठेर हिडिँसक्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नर्सिङ शाखा छ। नीति नियममा हामीमाथि भएका विभेद लिएर हामी त्यो शाखामा पुग्छौं। तर त्यो शाखा चिकित्सा महाशाखा अन्तर्गत भएकाले त्यहाँ पनि पुग्नुपर्छ। त्यहाँबाट चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डाक्टरले अघि बढ्नै दिँदैनन्। सचिवसम्म कुरै पुग्दैन। उनीहरु नर्सलाई आफ्नो हाराहारीमा आएको रुचाउँदैनन्। अझ डाक्टरहरुमा नर्स हामीले अह्राएको काम गर्ने मान्छे हुन् भन्ने सोच छ। अस्पतालमा हामीले डाक्टरसँगै सहकार्य गर्ने हो। किनभने हामीसँग औषधि लेख्ने अधिकार छैन। पेशाका आफ्नै विशेषता हुन्छन्। यसको अर्थ हेपिने वा कसैको नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने होइन होला।
तपाईंहरुको आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ अब?
हामीले उठाएका माग त नमागी पाउनुपर्ने अधिकारको कुरा हो। तर, हामी बिरामी छाड्नुपर्ने तहको आन्दोलनमा उत्रिनुप¥यो। हामीले आइसियू, सिसियू र इमर्जेन्सी छाडेका छैनौं। यदि, त्यहाँ पनि छाड्ने हो भने बिरामी बाँच्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ। शान्तिपूर्ण रुपमा उठाएका माग राज्यले नसुनिदिँदा यस्तो आन्दोलन गर्नुप¥यो। यसबाट बिरामी र सर्वसाधरणमा पर्न गएको असरप्रति क्षमा माग्दै हामी आन्दोलन छोड्दैनौं। सोमबारदेखि हामी १० बजेदेखि १ बजेसम्म काम गर्दैनौं। यो ३ दिन रहन्छ। यो समयमा पनि हाम्रा माग सुनुवाई भएनन् भने २४ घन्टा काम छाडेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम छ। त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ।